Maitiro Ekugadzira Zvinotaridzika Zvinoonekwa zve Instagram Nyaya | Martech Zone
Instagram ine vanopfuura mamirioni mazana mashanu vashandisi vanoshanda zuva rega rega, zvinoreva kuti hafu yenguva yese yevashandisi base Instagram kuona kana kugadzira nyaya mazuva ese. Instagram Nyaya ndedzimwe dzakanakisa nzira dzaungashandisa kubatana neako tarisiro vateereri nekuda kwayo anoshamisa maficha anogara achichinja. Zvinoenderana nehuwandu, makumi matanhatu neshanu ezviuru ezviuru zvemamirioni vanoti vanoona Instagram Nhau.
Nenhamba yepamusoro yevashandisi vanotevera shamwari, vane mukurumbira, uye bhizinesi, tinogona kufunga kuti vashandisi vazhinji varikudya zvakawanda zvemabhizinesi zvemukati nezvimwe zvese zvinopihwa neplatifomu. Kubatanidza uye kukwezva vateereri vako, unofanirwa gadzira inonakidza Instagram Nhau izvo zvinoratidzika pachena. Heano mazano masere ekugadzira ayo anogona kukubatsira iwe kugadzira zvimwe zvinonakidza, zvinotaridzika zvinotyisa, uye uchibata Instagram Nhau.
Shandisa Mifananidzo yeMifananidzo
Zvinoenderana nehuwandu, mavhidhiyo anotumirwa kazhinji anowana makumi matatu neshanu muzana kubatanidzwa uchienzaniswa nezvinyorwa zvemifananidzo. Naizvozvo, kana ukatadza kutora vateereri vako mumasekondi mana ekutanga ekuona, unogona kurasikirwa zvachose nekufarira kwavo. Kuwedzera mifananidzo kumifananidzo yako ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuisa kufamba uye chengeta vaoni vako vachiita.
Nekudaro, kana iwe usina vhidhiyo zvemukati, iwe unogona kuwedzera mifananidzo kune yako mifananidzo kana kugadzira yakasarudzika mifananidzo. Instagram inosanganisira zvimwe zvakavakirwa maturusi aunogona kushandisa, senge risingaperi GIF gallery kana enziyo mazwi. Uyezve, iwe unogona zvakare kushandisa chechitatu-bato Instagram zvishandiso zvemhedzisiro pane zvemagariro evanhu.
Gadzira Iyo Nhoroondo
Unogona kushandisa Instagram Nyaya munzira dzakasiyana siyana. Kubva kugovana maficha nyowani kusimudzira ako matsva eblog mablog, idzi nyaya dzinokupa iwe inoshamisa nzira yekubatana neyako yakatarwa musika usingaipukute seyako feed Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kutora kumashure-kwe-zviitiko mafoto, mifananidzo ye smartphone, uye kurarama mavhidhiyo pasina kunetseka kana ichienderana nezvimwe zvemukati zvaunazvo. Nekudaro, kana zvasvika kumagiraidhi eako Instagram Nyaya, unofanirwa kuona kuti urikugadzira zvigadzirwa zvinooneka zvinoyevedza izvo zvinokwezva vaoni vako kuti vazvigadzire. Imwe yedzakanakisa nzira dzekuita izvi ndeyokushandisa bhodhi renhau kuronga nyaya dzako usati watanga pane zvakagadzirwa.
Bhodhi renhau rinokubatsira kuronga zvirimo zvakakodzera kutumira uye kuronga zvemukati nenzira yaungade kuti iratidzwe. Izvo zvinobatsira mukuona kuti yako Instagram nyaya inoyerera mushe uye inochengeta vaoni vako vachiita. Bhodhi renhau rinokosha zvakare kana iwe uchiwanzo kuisa zvinyorwa pamusoro penyaya dzako nekuti zvinova nechokwadi chekuti nyaya dzako dzinoramba dzakabatana.
Yako Instagram nyaya haifanire kunge iine tsika grafiki dhizaini chete. Unogona kuzvishandura uye kusanganisira kutora mafoto dzimwe nguva. Chinhu chakanakisa pamusoro penyaya dze Instagram ndechekuti zvese zvaunoburitsa hazvifanirwe kunge zvakagadzirwa nehunyanzvi kana zvemhando yepamusoro. Panzvimbo iyoyo, unogona kushandisa kamera ye smartphone yako kutora zvimwe kuseri-kwe-zviitiko kutora mifananidzo mune iko kunyorera. Uyezve, kune mamirioni emahara emafoto ekutora mafoto anowanikwa ekushandisa zvakare. Iwe unongoda kusarudza mapikicha anoenderana nezviri kugovaniswa uye zvinoenderana nekambani yako kana brand.
Shandisa Yako Brand Ruvara Uye Mafonti
Kana uchishambadzira yako kambani kana zvigadzirwa, iwe unofanirwa kuchengetedza zvese zvaunogadzira pane brand, kusanganisira ako Instagram nyaya. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuve ne yakakwana brand kit yakagadzirira nguva dzese kuenda neyako logo, mafonti, uye hex kodhi, pakati pezvimwe zvinhu. Kusanganisira ako mavara emhando uye mafonti anobatsira zvakanyanya nekuzivikanwa kwechiratidzo, kunyanya kana vateereri vako vachipururudza kuburikidza nenyaya. Kunamatira kune yakasarudzika pendi pendi mune ako ese Instagram nyaya kwakakosha mukukura kwechirangaridzo chechirangaridzo. Kunyangwe iwe urikugadzira rako pachako brand, kana uine bhizinesi, kuchengetedza yako color scheme inoenderana kiyi. Shandisa iyo pendi yemavara zvine hungwaru uye nehunyanzvi kusimudzira kutaridzika kweako Instagram nyaya mifananidzo. Kana vatariri vako vaona ako maficha, vanogona kubva vangoziva kuti ndeyesangano rako vasina kana kuona rako rekushandisa.
Wedzera Chinyorwa Shadows
Iwe unofanirwa kugadzira zvekugadzira pamwe ne-in-app dhizaini yakapihwa ne Instagram kugadzira zvigadzirwa zvinonakidza zveyako ese Instagram nyaya. Iwe unogona kusanganisira mamvuri emumvuri mune yenyaya yekugadzira dashibhodhi nekusanganisira maviri matete eakasiyana mavara kune iwo iwo mavara. Iwe unogona kuzviita izvo nekutaipa chako chinyorwa mune rakasviba kana rakareruka mumvuri wobva waisa pamusoro pemumvuri uchishandisa zvishoma kona. Iri zano inzira inonakidza yekuwedzera mameseji pamusoro pevhidhiyo kana pikicha iwe yaunobata mukushandisa, zvichiita kuti zvive nyore uye nekukurumidza kugadzira yako Instagram nyaya usati wabuditsa.
Gadzira Overlays Uye kumashure
Iyo yekushandisa yekudhirowa yakapihwa neiyo Instagram app inogona kuita zvinopfuura kusimbisa uye kupenda iwo mavara mune yako nyaya. Ichi chishandiso chakasarudzika chinogona zvakare kukubatsira iwe mukugadzira yakatarisana nemavara uye nharaunda zvinowedzera kutaridzika kwenyaya dzako. Kana iwe uchironga kugovera zvimwe zviziviso zvakakosha pane yako Instagram nyaya pasina kuwana pikicha yekushandisa, iwe unogona kuvhura peni chishandiso, tsvaga iyo yekumberi kara iwe yaunoda uye wobva wadzvanya uchiibata kusvikira chidzitiro chese chashandura iro vara.
Uyezve, unogona kugadzira kupenya kwemavara nekushandisa chishandiso chekuratidzira cheichi chiitiko. Iwe unogona zvakare kugadzira mamwe ekunyepedzera peeks nekusanganisira iyo yekumashure kara pamusoro pemifananidzo yako uye kufambisa eraser chishandiso pamusoro kubvisa mamwe emavara uye kusimudzira yako mifananidzo. Kana iwe uchida zvemashure-zvehunyanzvi zvakagadzirwa uye zvakapeteredzwa unogona kubvunza vavaki vewebhusaiti vanogona kukuitira iwe. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve ivo pano, kana iwe usinganzwi wakasununguka kuzviita iwe pachako.
Shandisa maGIF Uye Zvidimbu
Instagram nyaya dzinokupa iwe akawanda akasiyana masitikita uye maGIF sarudzo kuti uunze pfungwa yechimiro uye kuseka kune ako magadzirirwo. Unogona kutsvaga chimwe chinhu chakanangana kana kupururudza kuburikidza nesarudzo dzakasiyana siyana dzekuwedzera kune ako Instagram nyaya. Kune rondedzero yezvitaera, uye iwe unogona zvakare kusanganisira hashtag stickers, Q & As, quizzes, uye polls kusimudzira kutaridzika kwezvinoonekwa zvako uye chengeta vateereri vako vachiita. Iwe unogona zvakare kugadzira uye kuendesa ako maGIF uye zvitambi zvevaoni kuti vawedzere kune yavo nyaya kana kupa nyore kuwana kune yako brand.
Kugadzira zvekusika uye zvinoonekera zvinokwezva Instagram nyaya chikamu chakakosha chebhizimusi rako kana rako chairo brand. Kunyangwe iwe uri mufanidziri, videographer, mutori wemifananidzo, kana bhizinesi diki bhizinesi, kugadzira yakanaka uye yakatanhamara Instagram nyaya dzinogona kukubatsira iwe kuparadzira meseji pane ako hunyanzvi hunyanzvi uye kuratidza rako basa kune rakakura vateereri. Iwo matipi akakurukurwa pamusoro anogona kukubatsira iwe kugadzira emhando yepamusoro magiraidhi ayo anozokwezva vatariri vako mune ako ese Instagram nyaya.
Tags: animated gifanimated gifsgifsinstagram matipi ekushambadzirainstagram storiesinstagram nhoroondo kumashureinstagram nyaya yekumakainstagram nyaya mafontiInstagram nyaya inopindiranainstagram nyaya pikichainstagram nyaya inonamirainstagram nyaya chinyorwa mimvuriinstagram storyboardStoryboardzvinoonekwa